အဆိုပါ cosmetician မှာဝက်ခြံဆက်ဆံဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဝက်ခြံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့? – bowlingdugolfe.com
Home/Beauty&Health/အဆိုပါ cosmetician မှာဝက်ခြံဆက်ဆံဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဝက်ခြံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့?
အဆိုပါ cosmetician မှာဝက်ခြံဆက်ဆံဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဝက်ခြံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့?
အဘယ်သူမျှမ. ဒါကြောင့်သင်မပြောကြဘူး, ထိုကောင်းမွန်သော Estheticians, သူတို့အရာရာကိုသိ, ဒါကြောင့်အရေပြားကိုစင်ကြယ်စေ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကပိုငွေရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့သာသင့်ရဲ့လှပမှုမှ (မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အုပ်ချုပ်မှုကို). ထင်, ငါမှား, အဆိုပါမေးခွန်းကိုဖြေ: အဆိုပါလှသည့်ကွာသငျသညျအခမဲ့လုပ်ဖို့ရှိမရှိ?
သင် cosmetician မှာဝက်ခြံပြုမူဆက်ဆံမဖြစ်သင့်အဘယ်ကြောင့်?
မှတ်ချက်, ငါ "မဖြစ်နိုင်" မ wrote, နှင့် "မလိုအပ်ပါဘူး". ဒါဟာဆက်ဆံဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကွာအောင်, မျက်နှာများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရေး, masochky, ကြေးဇူးပွုပွီး, ဒါဟာကြိုဆိုဖြစ်ပါသည်. သို့သော်လှ listen, သင်မည်သို့ဝက်ခြံဖယ်ရှားပစ်ရကြဘူး, ကရကျိုးနပ်မရ. ကုသမှုသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးဝက်ခြံ၏ကုသမှုများအတွက်ဆေးဝါးမပါဝင်ပါဘူး, သူတို့ကသာအရေပြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်. သင်တို့ရှိသမျှနည်းလမ်းကြိုးစားပါလိမ့်မည်နေစဉ်, သငျသညျလှအကြံပေးလိမ့်မည်ဟု, သင်တစ်ဦးသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်လက်လွတ်စေခြင်းငှါ, သငျသညျဝက်ခြံဖယ်ရှားပစ်ရလွယ်ကူစွာနဲ့အရှုံးမရှိဘဲခွင့်ပြုလတံ့သော.
ဒီမှာ, အလွန်ရှင်းလင်းသောစည်းမျဉ်းလည်းမရှိ, ဝက်ခြံကုသအမြဲတမ်းအရေပြားအထူးကုဆရာအားဖြင့်ကျင်းပ, သာသူကသင့်ပြဿနာကိုအဘို့အညာဘက်ကိုဖြေရှင်းချက်ရွေးချယ်ဖို့အတှကျစစ်ဆေးခြင်း၏အခြေခံပေါ်မှာလုပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်, လိုအပ်သောဆေးဝါးကုသမှုပြင်ဆင်မှုသတ်မှတ်.
- ဘယ်အချိန်မှာသင်၏မျက်နှာကိုသာတံခါးပိတ် comedones ဖြစ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်သူတို့နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မနိုင်.
- ဘယ်အချိန်မှာသင်၏မျက်နှာကိုသာအနီရောင်, ဝင်ပြီးအစက်အပြောက်, ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, အနက်ရောင်အစက်.
ကျနော်တို့ pilling ပါဘူး, အကောင်းဆုံး, အထိရောက်ဆုံး - က glycolic acid ကိုအတူ peels.
အသုံးမကျသူတို့ကိုဆက်ဆံဖို့မူလစာမျက်နှာ, အရေပြားအထူးကုဆရာအမာရွတ်များပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်. ကျနော်တို့အသားအရေ resurfacing ပြုပါ, နက်ရှိုင်းသော Peeling, mikrodermabraziyu, လေဆာ (တဦးတည်းအရာ).
နက် Peeling Make, mikrodermabraziyu, အသားအရေ resurfacing.
အလွန်မကြာခဏ, လှသူတို့ကိုမည်သည့်အလှကုန်ပစ္စည်းလိုင်းဝယ်ဖို့အကြံပေး, ပုံစံ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပြဿနာကိုကူညီပေးပါမည်. အစဉ်အဆက်ကိုယူမနေပါနဲ့! လှအကြံပြုနိုင်ပါတယ်, ထို့နောက်သင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်နိုင်, မဟုတ်သူမ၏. သိ, ကကမ်းလှမ်းလျှင်, သူမငွေရှာဖို့လိုလား!
ဆေးဆိုင်, အဆိုပါဆိုင်များအမျိုးမျိုးသော tools တွေကိုအပြည့်အဝရှိပါတယ်, ကြောင်းသင်သည်သင်၏အသားအရေများအတွက်ဂရုစိုက်ကူညီပေးပါမည်, တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့အများကြီးပိုကောင်းများမှာ, ပိုက်ဆံထက်, တစ်လှကမ်းလှမ်းရာ. သငျသညျအရေပြားများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုဝယ်ချင်ပါနဲ့, အသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ကုထုံးဆေးဝါးထုတ်ကုန်ကို select (Eksfoliak, သေဝ, Bioderma, Uriyaj, ပိုမိုမြင့်မား, la rosh Pozey စသည်တို့ကို), သငျသညျအရင်းအမြစ်များအများကြီးတွေ့နိုင်ပါသည်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကောင်းသည်ဖြစ်သကဲ့သို့, သငျသညျလွတ်လပ်စွာဆေးဆိုင်မှာသူတို့ကိုမဝယ်နိုင်.
ကံကောင်းပါစေ! ထိုအသတိရ, ဝက်ခြံဆရာဝန်ကုသရပါမည်, တစ်လှသင်တို့အဘို့, လက်ျာအသားအရေစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အရေပြားရွေးချယ် Uluchay.
အဆိုပါ cosmetician မှာဝက်ခြံဆက်ဆံဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်?: 8 မှတ်ချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားဖြင့်ငါဆိုသည်ကား - သာဆရာဝန်တစ်ဦးလိုအပ်ဝက်ခြံဆက်ဆံပါ! ဘာလှမရှိတယ်, တစ်အရေပြားအထူးကုဆရာ! ငါအသားအရေထိုကဲ့သို့သောထိတ်လန့်မှယူဆောင်ငါ၏အ Self-ကုသမှုနှင့်အတူဖြစ်ကြောင်းကို, ကြောင်းထို့နောက်ခဲအမိန့်မှသူမ၏ဦးဆောင်. ဆရာဝန်တစ်ဦး interjected သောအခါ, သာဖြစ်ပါသည်. အဘယ်အရာကိုအမြင်ကြည်လင်စေရန်ဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့တယ်: Zerkalin (ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးဝါး), detoxification, ဗီတာမင်နှင့်ဟန်ချက်ညီတဲ့အစားအစာ.
မိန်းကလေးငယ်များ, အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောဆရာဝန်များနှင့်လှရှိပါတယ်. တိုင်ပင်ဘို့သွားကြဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ, ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်. မျက်နှာပေါ်မှာမြင်နိုင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာများ. ဒါကြောင့်အစပိုင်းတွင်သင်သည်အရည်အချင်းပြည့်အထူးကုကူညီပေးနိုင်ပါသည်. တခါတရံသူကညာဘက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပြုပါရန် သာ. ကောင်း၏, peels(ဒါပေမဲ့အပေါ်ယံ ). အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ, အနည်းဆုံးအားအလှကုန်နှင့် ပတ်သက်., အရာလှအလုပ်. ကောင်းပြီ, သငျသညျဆိုပါက3ဝက်ခြံဒီဂရီ, ထို့နောက်ကုသမှုပဋိဇီဝဆေးပေါ်မှာ, ထို့နောက်သစ်ပင်ပန်းမန် restore, အသည်း. ဟုတ်မဟုတ်ကျော်, ဆရာဝန်များကိုကူညီနိုငျ, ငါသဘောမတူဘူး, ဘုရားသခင်ထံမှဆရာဝန်များကဖြစ်ပျက်အမျှဆရာဝန်များမှ t ... ကွဲပြားခြားနားကြသည်, နှင့် Estheticians. 
ကျနော်တို့မင်းသမီး၏အဝိဇ္ဇာတွေးမိ. အရေပြားအထူးကုဆရာ cosmetologist - အားလုံးအသားအရေပြဿနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း. က voach, အတိတ်6ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ့် 2-5 အရေပြားအတွက် s ကို Residency, mykolohy, trichology.
သငျသညျကိုယခင်လက်ထောက်သှားဖို့ပိုနှစ်သက်, စာရင်းကိုင်, ဟောင်းတဦးကျောင်းသူ, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဆရာဝန်များအထူးပြု, တစ်ခုမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်အဖြစ်, အရေပြားပင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမသိရ, သာဖြစ်သောကြောင့်, သူတို့ 3-4 တစ်ပတ် "လှ" ၏အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်! သင်ရိုးညွှန်းတမ်း. ထိုအခါစကားလုံးက "လှ" တရားမဝင်ဒီနေရာမှာရေးထိုး, ဒါပေမယ့်ထိုအမှုအရာများသည်ပညာရေး၏အမည်ရင်း - aesthetists.
တောင်းပန်ပါတယ်, သင်မူကားတစ်ချိန်က Cosmetology အကြောင်းကိုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှမဟုတ်ကြလျှင်ရေးသားခဲ့သည်. တဦးတယောက်တည်းရဲ့အရွယ်အစားအားလုံးကိုက်ညီဖြစ်ပါဘူး.
ငါဆိုဗီယက်ဆေးရုံအတွက်အရေပြားအထူးကုဆရာထံသို့ ဝင်., Klindovit တစ်ဦးအမြင်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော, နှင့်ဝက်ခြံကပြောပါတယ် - ကရောဂါမဟုတ်ပါဘူး. စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်း, ငါလှမှတက်လက်မှတ်ရေးထိုး(ဟောင်းတဦးကလေးအထူးကု). သူမသည်ငါ့ထံသို့အရာအားလုံးကရှင်းပြခဲ့သည်, သင့်ရဲ့မိတ်ကပ် "vtyuhyvala" မဟုတ်ပါဘူး, နှင့်အဆိုပြုထားအလားတူနည်းလမ်းများ(ဓာတုဗေဒပညာရှင်ရဲ့အလှကုန်), ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တစ်ဦးဆေးဆိုင်ဝယ်. သူမသည်ငါ့ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလှကုန်ရှင်းလင်းစေသည်. ဝက်ခြံပြင်းထန်ဇာတ်စင်၏ရောဂါဖြစ်ပါသည်နီးပါးပျောက်ကွယ်သွား, သို့သော်ခြောက်လထိုနောက်ငါယာယီစွန့်ခွာခဲ့, ရာသီဥတုအားလုံးမှာသတ္တုတွင်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာစတင်ခဲ့ပြီးမဟုတ်သည်အဘယ်မှာရှိ, ယခုသူသည်နောက်တဖန်ပျံသန်း. ဤရွေ့ကား, သူမ၏အမှားမဟုတ်ပါဘူး, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်, ဒါကြောင့်မထွက်ခွာမှီတိုင်ပင်ဘို့မလာဘဲ.
ငါထင်, ဒါဟာတင်းကြပ်စွာလိုအပ်သော cosmetologists မဟုတ်တားမြစ်ထားသည်, မှုတ်ရေ, scalded နို့.
ဘယ်လိုမျက်နှာပေါ်မှာဝက်ခြံအမာရွတ်ဖယ်ရှားပစ်ရ? 10 သဘာဝသယံဇာတများ
Как выдавливать прыщи в домашних условиях, ဝက်ခြံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့?
ဝက်ခြံပုန်းများ: အကြောင်းပြချက်, ကုသမှု, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Как искоренить акне
ဘယ်လိုအပြီးဝက်ခြံ၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ရ -5အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု